Qaabkee ayay Maxkamadda ICJ ugu dhawaaqi doontaa go’aanka laga sugay? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Qaabkee ayay Maxkamadda ICJ ugu dhawaaqi doontaa go’aanka laga sugay?
Qaabkee ayay Maxkamadda ICJ ugu dhawaaqi doontaa go’aanka laga sugay?
(Hague) 12 Okt 2021 – Fadhiga Maxkamadda ICJ ee maanta wuu ka duwanyahay kuwii hore ee aan daawan jirnay, waxuu qaadan doonaa wax ka yar hal-saac, waxaana la akhrin doonaa ku dhawaaqista xukunka oo qoraal ah.
Maxkamadda lagama akhriyo taariikhda dhacdada iyo hordhac badan sida noqotay dhaqan caalami ah (international usual practice), waxaa la akhrin doonaa oo kali ah asbaabta xukunka uu ku dhisanyahay iyo ku dhawaaqista Xukunka.
Sidoo kale sida caadiga ah Maxkamadda waxay mar kale kusoo celin doontaa go’aanadii horudhaca ahaa ee hore iyadoo lagu darayo xukunka sida diidmada ishortaagga awoodda Maxkamadda ee Kenya “Kenya preliminary objection” iyo go’aanka sii socoshada dacwadda maadaama ay Kenya maqnayd.
Ugu dambayn waxay sheegi doontaa Maxkamadda go’aankeeda dulucda dacwadda “subject-matter judgment” iyo Garsoorayasha ayidey ama diiday.
W;D: Garyaqaan Cali Soomaali
Previous articleTOOS u daawo: N. Macedonia vs Germany, Holland vs Gibraltar, Croatia vs Slovakia – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article”Ciidankeennu waxay ku jiraan diyaargarow!” – Maxay shacabka Kenyan-ku ka yiraahdeen go’aanka ICJ ee galabta la sugayo?!